Hay’ada Kafaalo oo baaq u direysa Soomaalida Sweden | Somaliska
Hay’ada Kafaalo oo baaq u direysa Soomaalida Sweden
Waxaa guud ahaan Soomaaliya soo foodsaray abaar baaxad wayn oo daran. Abaartaan oo saamaysay dadka iyo xoolahaba. Abaarahaan ayaa dhashay kaddib markii la waayay roobkii da’i jiray xiliga Deyrta.
Dadka u dhuun duleela cilmiga abaaraha iyo waaxo ka mid ah Qaramada Midoobay waxay saadaalinayaan in abaaruhu saamayn ku yeelan karaan ilaa 2.4 malyan oo qof. Qaar kamida warbaahinta aduunka waxay soo gudbiyeen dad badan inay usoo qaxeen magaalooyinka waa wayn iyo in xoolo badana la’deen.
Haddaba Hay’adda samafalka ee Kafaalo waxay khayrfalayaasha Soomaaliyeed ku wargalinaysaa in ay u istaagtay waxkaqabadka baahidaas oo ugu yaraan 1000 ilaa 5000 qoys aan kala gaarno biyo dhaamis iyo raashinka qaybihiisa muhiimka. Sidaa awgeed waxaan ku boorinaynaa khayrfalayaasha Soomaliyeed in ay walaalohooda dhibaataysan caawiyaan, waana tii xaddiska Nebigu (scw) ahaa :
”Qofkii ka fayda qof kale oo Muslmn ah dhib ka mid ah dhibaayooyinka aduunka, Alle ayaa ka faydaya mushkilad ka mid ah mushkilaadka Qiyaamaha” .
Sidee uga qayb qaadan kartaa?
Waxaa lagu taageeri karaa qoyska ka kooban lix ruux fuusto biyo ah, 25kg bur, 25kg bariisa, 2.5 timir ah, 3.5 saliid ah iyo 2.5kg caano coast ah, waxayna isku noqon kartaa 700 kr ama $100 ama waxaad awoodo ayaad bixin kartaa.
Swedbank: 8327-9,904 132 956-7
MACLUUMAAD DHEERI AH [PDF]
Websiteka Hay’ada Kafaalo
Fanaanka Mohamed BK oo wacdaro ka dhigi doona Stockholm
July 30, 2011 at 14:40
asc walaal jimcaale waa soo dhoweynayaa wixii tabaruc ah loogu kaalmeeynaayo dadka walalaheena ee ku dhibaateysan wadanka waa ogahay xaalada murugsan ee ka jirta somalia..